DEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis La Gaadhay Difaacii Xulka Faransiiska & Real Madrid Ee Muddada Lala Xidhiidhinayay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis La Gaadhay Difaacii Xulka Faransiiska & Real Madrid Ee Muddada Lala Xidhiidhinayay
DEG-DEG: Manchester United Oo Heshiis La Gaadhay Difaacii Xulka Faransiiska & Real Madrid Ee Muddada Lala Xidhiidhinayay
July 15, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshiis la gashay difaaca reer France ee Raphael Varane, kaas oo maalmihii ugu dambeeyey ba ay qarka u saarnayd saxeexiisa.
Manchester United ayaa bartilmaameedka dhigatay difaaca Real Madrdi ee Raphael Varane oo sannadkii ugu dambeeyey uu qalay qandaraaskiisa Los Blancos, iskana diiday inuu muddada u kordhiyo kooxdiisa.
Ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay labada kooxood iyo ciyaartoyga midna, hase yeeshee warbaahinta ayaa shaacisay, in wada-hadallo u dhexeeyey Manchester United iyo Varane lagu gaadhay heshiis isfaham oo uu ciyaaryahankani ogolaaday inuu tago Old Trafford.
Laacibkan ayaa aqbalay qorshaha Manchester United ula timid ee muddada uu u ciyaari doono iyo mushaharkiisa intaba, waxaana hadda hadhsan kaliya in labada kooxood wada fadhiistaan oo ay ka heshiiyaan lacagta ay ku kala iibsanayaan.
Real Madrid ayaa la rumaysan yahay inay ka go’an tahay inay iibiso Varane si aanu bilaash ugaga tegin sannad kaddib, waxaanay warbaahintu sheegayaan in ay ku riixaysay Manchester United sidii ay ula wareegi lahayd laacibkan.
Qiimaha ay Real Madrid dalbanayso ayaa la sheegay inay tahay 50 milyan oo Euro, halka Manchester United ay hore ugu caddaysay inay bixin doonto 45 milyan oo Euro, taas oo ka dhigan in farqiga u dhexeeya uu aad u yar yahay.
Si kastaba, heshiiska Varane ee Manchester United ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa marka ay labada kooxood ka heshiiyaan lacagta ay ku kala iibsanayaan, sidoo kalena uu laacibkani qalinka u qaato saxeexa heshiiska uu sida hordhaca ah usii ogolaaday.
Walaalow war cad haduusan eheen Maxa uleedahay ,Deg Deg Man utd oo hashiis la gaartay fulaan fulaan 🤦🏽‍♂️ Beenta naga daaya wax is badal ah kama imaanin wa sidii an ku ogeen ee fadlan noo kala yareeya waalitanka